ICinema yezinja iyiqiniso, thola ukuthi imayelana | Izinja Umhlaba
ICinema yezinja iyiqiniso
Konke ukunethezeka abantu abanakho, kancane kancane kuyakhonjiswa ezifuyweni. Sivele sadlula umshwalense wezokwelapha wezilwane Ezinja zethu, iCanine Spas, lapho ziba zinhle khona ngenkathi ziziphumulele, futhi manje futhi ziyanelisa isidingo abantu abavame ukuba naso lapho sikhathele yimisebenzi yethu, okungukubona nokujabulela ama-movie amahle.
ICinema yezinja iyiqiniso futhi lokhu kuvunyelaniswa nezidingo zezilwane esizithandayo. Awazi yini ukuthi sikhuluma ngani? Kulesi sihloko sizokutshela konke ngalolu hlobo lwe-cinema, lapho kufanele uthathe umngane wakho onoboya.
1 Yini ehlukanisa i-cinema yezinja ne-cinema yabantu?
1.1 Ivolumu yomsindo
1.3 Umshini ongenisa umoya
2 Uvelaphi umqondo webhayisikobho wezinja?
3 Ukufika eSpain kwe-cinema yezinja
Yini ehlukanisa i-cinema yezinja ne-cinema yabantu?
Lapho sicabanga ngebhayisikobho, sicabanga ngqo konke ukunethezeka abangaba nakho ngathi. Isikrini esikhulu, umsindo ocacile nevolumu eningi, umoya opholisa umoya ubanda kakhulu ngezikhathi zokushisa, njengoba amakamelo amaningi ethanda ukuba nawo nezinye izinhlobo zokunethezeka esizijabulela ngokugcwele lapho sifika egumbini lokubuka i-movie yethu esiyithandayo, ukuze sanelise isidingo sethu sokuzijabulisa nesinema enhle .
Endabeni yamabhayisikobho wezinja, lezi zinhlobo zokunethezeka akufanele zivumelane nalezo abantu abanazo, ngoba bona, uma bekwazi ukukhetha, bangakhetha ezinye izinhlobo zezidingo, okuyizinto ezibhekwayo namhlanje, ngoba bekucatshangwa ukuthi igumbi lapho kuqhutshwa khona ifilimu lingangena kulaba, abangani abakhulu babantu.
Phakathi kwezinto ezidingekayo ukuze inja izizwe ikhululeke njengathi endaweni yaseshashalazini yamabhayisikobho, kukhona okulandelayo:
Thina bantu siyathanda ukuya ezinkundleni zemidlalo yaseshashalazini ukuzwa umsindo omkhulu weDolby ovela kumabhayisikobho futhi sithanda ukuthi ivolumu yalo msindo isezingeni eliphezulu impela, ukwazisa yonke imininingwane yomsindo efakwe kwifilimu futhi ukwazi ukuyithokozela ngokugcwele.
Endabeni yezinja lokhu kuhluke ngokupheleleBalalela kakhulu futhi kangcono kunathi futhi banezinga lokuzwela ekwakhekeni kwezindlebe zabo, okubenza bathande imisindo kuze kufike ebangeni eliphindwe kayi-4 kunabantu.
Yingakho i-cinema yezinja kufanele ibe nevolumu yomsindo ephansi kakhulu, lokhu kwehluke ngokuphelele, ukuze bakwazise abakuzwayo ngaphandle kokuzizwa bemangele.
Luhlobo luni lokukhanyisa esikufunayo lapho siya kuma-movie? Noma ngabe sikwelinye lamagumbi, noma uma sibuka ama-movie avela enduduzo kasofa wethu, sihlala sizama ukungakhanyisi izibani. Lokho kusenza sigxile ngqo ekukhanyeni esikrinini, ngaphandle kokunye okuphazamisayo.
Endabeni yezinja, akunjalo. Umbono wakho uhluke ngokuphelele kowethu, yize bengaboni kokumnyama nokumhlophe njengoba kushiwo kwesinye isikhathi. Izinja ziyakwazi ukubona eminye imibala, njengokuphuzi nokuhlaza okwesibhakabhaka ngokwemvelo kanye nemibala ebomvu noluhlaza okotshani, yize kungenjalo ngokucacile.
Ukuze inja yakho ibonge leyo mibala engayibona, ukukhanyisa akukwazi ukuba sesibukweni kuphela, kepha kuzodinga ukukhipha la mathoni ngokukhanya okusegumbini. Ngakho-ke indawo lapho kuhlolwe khona ama-movie wezinja kumele kukhanyiswe, okuphambene nalokho esikuthandayo thina bantu, okuwukuthi konke kumnyama futhi kunesikrini kuphela.
Ngokuvamile, amabhayisikobho abantu athambekele ekubeni nesimo sezulu esipholile ngaphakathi kwamabhayisikobho abo. Ehlobo isimo somoya ovamile sigcina isiza emazingeni okushisa aphansi, kuze kufike ezingeni lokuthi kufanele sigqoke izingubo ezifudumele ukuze singazweli emakhazeni. Ebusika, ukufudumeza nakho kubeka igumbi ezingeni lokushisa eliphakeme.
Endabeni yamabhayisikobho wezinja, lokhu kushisa akufanele kube ngokweqile. Endabeni yokufudumeza, lokhu akufanele kube kuphakeme kakhulu, ngoba uboya bezilwane zethu esizithandayo babagcina besezingeni lokushisa elingcono.
Kwenzeka okufanayo nasomoya opholile ehlobo, okumele uguqulwe futhi uyiswe ezingeni lokushisa eliphakeme, ngoba awadingi amakhaza angaka ngaphakathi ekamelweni ukuze ezwe kahle. Ngakho-ke isimo sezulu kufanele singathathi hlangothi ngokwengeziwe, kungakhathalekile ukuthi unyaka ungakanani.
Uvelaphi umqondo webhayisikobho wezinja?
Umqondo wokuletha i-cinema emkhakheni we-canine uneziphikiso zawo zokuqala eMexico City, ngqo ngo-2016, lapho ibhayisikobho endaweni yanquma ukuqala ukubamba izikhathi zamafilimu ukuze abantu bahambisane nezilwane ezifuywayo, okungukuthi, imisebenzi yePet Friendly.
Le misebenzi ibinazo zonke izidingo esizishilo ekuqaleni ukuze izilwane ezifuywayo zizizwe zikhululekile endaweni evumelana nazo futhi, noma ngabe bezizinja, lezi kwakuyinkampani yabantu, emakamelweni abantu.
Lokhu kusho ukuthi ukuze kungonakali igumbi kanye nezihlalo, ezizosetshenziswa ngezikhathi ezithile kubantu kuphela, labo bantu abahambe nezinja zabo baceliwe ukuthi balethe izingubo zokulala, ukuzimboza kanye nezinye izidingo ukugwema noma yiluphi uhlobo inkinga, njengokuthi irekhodi lokugoma lisesikhathini nokunakwa njalo kwabanikazi kusilwane ngasinye ezifuywayo, ukuze gwema izimpi noma olunye uhlobo lokuphazamiseka.
Lezi imisebenzi enobungane yezilwane zasekhaya yayiyi-hit ngempela, ngoba abantu abaningi bathanda ukuya yonke indawo bephelezelwa abangane babo bezinja abathembekile, kepha ezindaweni eziningi kuze kube manje laba abamenyiwe. Enye yalezi zindawo kwakuyi-cinema, kepha lokhu sekuvele kushintshile futhi sekufinyelele nakwezinye izingxenye zomhlaba, lapho kwakhiwa khona amakamelo nemibukiso yezinja.
Ukufika eSpain kwe-cinema yezinja
Ngawo lowo nyaka lapho umbono wokudlulisa ukunambitheka kwe-cinema ezinjeni wafezeka, izofika eMadrid, ngqo egumbini leCinesa Proyecciones, abathathe lo mbono ukuwenza emakamelweni abo, baphinde babeka indawo ukuze isiza sikulungele ukuya kobuka i-movie enkampanini yezilwane esizithandayo.
Isikhathi sokuqala sefilimu sezinja esasibanjelwe eSpain saba nokuqagela kwefilimu ukujabulela lezi zilwane ezifuywayo I-Ice Age 5: I-Great Cataclysm futhi kwakungekho ukuswela induduzo ngezinja zethu esizithandayo ukuzizwa endaweni efanele. Kwakukhona ukudla okulula okukhethekile kwezinja, indawo elawulwa yisimo sezulu, ukukhanyisa ngokuvumelana nevolumu yomsindo abayidingayo ukuze babe nesikhathi esihle sama-movie.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Curiosities » ICinema yezinja iyiqiniso
Inja yami iluma umbhede wayo, izimbangela nokuthi ungakugwema kanjani
Yini iChow Chow Panda?